अश्वमेध यज्ञमा किन छोडिन्छ घोडा ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
अश्वमेध यज्ञमा किन छोडिन्छ घोडा ?
अश्वमेध यज्ञ हामी सबैले सुनिराखेका नै छौँ । अश्वमेध यज्ञ पौराणिक कालमा गरिने एक प्रकारको यज्ञ हो । यो यज्ञ पौराणिक कालका राजाहरूले सर्व सुख प्राप्तिको लागि गर्दथे । एक सय वटा अश्वमेध यज्ञ गरेमा स्वर्गको राजा हुन पाउने भएकाले कसैले सय अश्वमेध यज्ञ पुर्याउन लागेमा देवराज इन्द्रले यज्ञ बिथोलेका कथाहरू हिन्दू धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका छन् ।
अश्वमेधको निमन्त्रण स्विकार नगर्ने अथवा अश्वमेध गर्न नदिने मनसायका व्याक्तिहरूले घोडालाई समातेर घोडाको रक्षार्थ खटिएका सेनाहरूसँग युद्ध गर्ने नियम थियो ।
अश्वमेध यज्ञ गर्न पहिले श्यामकर्ण घोडालाई वैधिक विधिपूर्वक स्नान गराई आभूषाणादिले सिङ्गारेर घोडाको निधारमा अश्वमेध गर्ने राजाको वर्णन लेखिएको धातुको पातो टाँसी पृथ्वी भरमा निम्ताको लागि परिक्रमा गराइन्थ्यो ।
अश्वमेधको अश्वको रक्षाका लागि अश्वमेध गर्ने व्याक्तिका सेनाहरू पनि घोडासँग हिड्ने गर्थे । अश्वमेधको निमन्त्रण स्विकार नगर्ने अथवा अश्वमेध गर्न नदिने मनसायका व्याक्तिहरूले घोडालाई समातेर घोडाको रक्षार्थ खटिएका सेनाहरूसँग युद्ध गर्ने नियम थियो ।
घोडाको रक्षार्थ खटिएका सेनाहरूले घोडा समात्ने व्यक्ति तथा सेनासँग युद्ध गरेर घोडा छोडाउनु पर्ने नियम थियो । यसरी पूरा पृथ्वीको भ्रमण गरेर घोडा अश्वमेध गरिने राज्यमा फर्काएपछि वैधिक विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ गरिन्थ्यो ।